शेयर Archives - Lokpati.com
Tag - शेयर
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंककाे सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत लाभांश
काठमाडाैं। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई अधिकतम १६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । आइतबार बसेको बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले गत वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट ११.२४ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.७६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने...
उत्पादन • विकास/निर्माण
मध्य भोटेकोशीकाे आईपीओ आउँदै
काठमाडौं। मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले आगामी असोज २० गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ । कम्पनीले कूल ९० करोड बराबरको एक सय अङ्कित मूल्यका ९० लाख कित्ता...
कुमारी बैंकले गर्‍यो बोनस शेयर दिने घोषणा
काठमाडाै। कुमारी बैंक लिमिटेडले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई नगद लाभांशसहित शेयर बोनस बाँड्ने घोषणा गरेको छ ।
बैंकको गत असोज ११ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको २.६७ प्रतिशत नगद...
काठमाडौं। बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले दुई कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। यस दिन नेप्सेले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र ज्योति विकास बैंकको शेयरमूल्य समायोजना गरेको हो। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले हकप्रद...
हिमालयन डिष्टीलरी र साल्ट ट्रेडिङको शेयर मूल्य आइतवार बृद्धि
काठमाडौं । हिमालयन डिष्टीलरी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको शेयर मूल्य आइतवार १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ । ती दुबै कम्पनीको शेयरमा विक्रेताभन्दा खरीदकर्ता अत्याधिक रहेकाले शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको हो ।
स्टक एक्सचेञ्जले भन्यो- शेयर बिक्रीमा अग्रिम रकम नलिनु
काठमाडौं, १७ माघ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले धितोपत्र बिक्री गर्दासमेत अग्रिम रकम माग गरेको भन्दै त्यस्तो नगर्न नगराउन धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।
धितोपत्र खरिद गर्दा अग्रिम रकम लिने व्यवस्था भए पनि बिक्री...
चन्द्रागिरि हिल्सले आइपीओ निष्काशन गर्ने
काठमाडौं, १७ पुस । चन्द्रागिरि केबलकार सञ्चालन गरिरहेको चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले रु. १५ करोड बराबरको १५ लाख कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. १०० मा साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ ।...
शेयरधनीलाई दश प्रतिशत शेयर लाभांश दिने
९ पुष २०७५, सोमबार
काठमाडौँ, ९ पुस । सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना शेयरधनीलाई दश प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब बराबरको शेयर लाभांश वितरण गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले चुक्ता पूँजीको दश प्रतिशत अर्थात् रु. १ अर्ब...